प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा रविन्द्र अधिकारी निर्दोष थिए ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा रविन्द्र अधिकारी निर्दोष थिए !
प्रकाशित मिति १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १६:३२ लेखक nepali janta
काठमाडौं । हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न शुक्रबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडीबारे बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा रविन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको बताएका छन् ।
ताप्लेजुङमा बुधबार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अवैध सम्बन्ध लुकाउन सासुको हत्या प्रयास, बुहारी पक्राउ
काठमाडौं । आफ्नै सासूलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या प्रयास गर्ने एक महिलालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौं ।सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण त्यस्तो रकम खर्च गर्न…
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान…
बैतडीको पाटन स्वास्थ्य केन्द्रमा ईसीजी र भिडियो एक्सरे सेवा
बैतडी । बैतडीको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ईसीजी र भिडियो एक्सरे…
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो संसद । संसदले मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण गर्दछ यहि संसदले सरकारको…
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक बिदा…